Home Wararka Qaab cusub oo loo qorsheeyay in loo qabto doorashada berito ee Baydhabo (Xog...
Qaab cusub oo loo qorsheeyay in loo qabto doorashada berito ee Baydhabo (Xog Xassaasi ah)
Iyada oo ay soo kordhayso cabsida laga qabo in xidhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed in ay codkooda la aadan meelo aan loogu tagalin amaba ay diidaan in ay ku soo xaaadiraan goobta codeynta ayaa waxa ay caawa ay la yimaadeen kooxda Farmaajo qorshe cusub oo lagu maareynayo doorashada.
Farmaajo ayaa waxaa loo sheegay in lacagta faraha badan ee uu caawa bixiyay ayan xaqiijin karin in Cabdicasiis Xassan Lafta Green la dooran doono. Waxaa macquul ah in lacagta laga qaato isla markaana codkooda uu meel kale aado. Sidaas darteed ayaa waxaa la qorsheeyay in ayan beri dhicin doorasho laakiin la sameeyo caleemasaar.
Qorshahuna waa sidaan:
Waxaa caawa lacag iyo handadaad la isugu geeyay musharaxa Adan Saransoor. Musharaxa ayaa waxaa lagu qasbayaa in uu tanaasulo inta aan la tagin goobta hadii uu diido in uu tanaasulo waxaa la xaqiijinayaa in aan marnaba loo ogolaanin in uu tago goobta doorashada. Waxaana qorshuhu yahay in la isticmaalo awood kasta ee xaqiijin karta in uusan beri tagin goobta codeynta.
Dhamaan musharixiinta kale oo dhan waxaa lagu qasbayaa in ay iska tanaasulaan oo ay ka baxaan doorashada inta aan la tagin hoolka lagu codeeynayo, inta aan ka ahayn Musharax Sayid Axmad.
Waxa la doonayaa in ay isku soo haraan oo kaliya Musharax Sayid Axmad oo lacagta damiinta ah uu ka shubay MW Farmaajo iyo Musharaxa Cabdicasis Lafta Gareen.
Si hadaba aan shaki u galin codeynta Lafta Gareen ama codka aan loo siinin Sayid Axmed oo ah mushaxaa kaliya ee haray, ayaa marka diiwaan galinta dhamaato waxa uu Musharax Sayid Axmad codsanayaa in uu la hadlo xildhibaanada si uu fartiin ugu sheego.
Waxa uu u sheegayaa xildhibaanada in uu ka tanaasulay doorashada isaga oo fiirinaya danaha dadka deegaanka Koonfur Galbeed.
Gudoomiyha Gudiga Doorshada ayaa hadlaya oo sheegaya in doorashadii uu ku guulaystay Cabdicasisi Xassan Lafta Gareen madaama uusan jirin Musharax kale oo la tartamaya maadaama musharaxiintii kale oo dhan ay ka tanaasuleen doorashada.
Isla berito galab waxaa qoraal ka soo baxayaa Wasaarada Arimaha Gudaha taas oo cadeeynaysa in doorasho xaq ah ka dhacday Koonfur Galbeed Madaxweynaha cusubna uu yahay Cabdicasis Xassan Lafta Gareen. Isla berito galab waxaa hambalyo soo dirayo RW Kheyre oo ugu hambalyaynayo doorashada lagu doortay Cabdicasiis Lafta Gareen.
Wararka ay heshay MOL caawa ayaa sheegayo in berito bandoow buuxa lagu soo rogayo magalaada Baydhabo maadama sahacabka Koonfur Galbeed ayan marnaba ogolaan doonin natiijadda ka soo baxdo doorashada been abuurka ah ee lagu qabtay Baydhabo.
Previous articleBaydhabo “Guri kastaa iyo wada kastaa Itoobiyaan baa caawa taagan, waxaan nahay la haystaal, war miyaanan Soomaali ahayn”
Next articleSomalia: Sahan Research and Political Insight
RW Rooble ma Dhibbanaa misa waa Dhagarqabe Farmaajeysan?